Abavotelwa KukaMongameli Basebenzisa Kanjani Ukuthengisa Nge-imeyili | Martech Zone
Abavotelwa KukaMongameli Basebenzisa Kanjani Ukuthengisa Nge-imeyili
NgoLwesine, Juni 30, 2016 NgoLwesine, July 28, 2016 Douglas Karr
Okhethweni olwedlule, ngenze iphutha ngokuthumela ezinye izindatshana zepolitiki kule bhulogi. Ngabamba isidleke se-hornet futhi ngezwa ngakho izinyanga ezalandela. Le akuyona ibhulogi yezepolitiki, ibhulogi lokumaketha, ngakho-ke imibono yami ngizoyigcina kimi. Ungangilandela ku-Facebook ukubona iziqhumane. Lokho kusho ukuthi, ukumaketha kuyisisekelo sayo yonke imikhankaso.
Kulo mkhankaso sibona uDonald Trump eshaya inja yemidiya yendabuko njengochwepheshe weqiniso. Ubesematheni iminyaka eminingi futhi uyayiqonda indlela yokwenza abantu bakhulume ngaye. Futhi ngokungangabazeki lokho kusetshenzisiwe njengoba bonke abanye abazongenela ukhetho lweRiphabhulikhi bewele eceleni kwendlela. Ngenkathi lokho kwakha udumo, kungahle kungamnqobi umkhankaso.
I-imeyili isibe ngumgcini wesango lobunikazi be-inthanethi. Cabanga ngale ndlela, mangaki amafomu nezinsizakalo esizibhalisela ukufaka i-imeyili yethu? Lokhu kwenze i-imeyili, uma isetshenziswe kahle, yaba ngelinye lamathuluzi wokukhangisa asebenza kahle kunanoma iyiphi imboni, njengoba kukhonjiswa ngokusobala kudatha yethu yocwaningo. Kubantu abaningi, lezi zinto zenze i-imeyili ibe yisidina esidla isikhathi nenhlangano. Kungakho sidale Imeyili ye-Alto, ukusiza abasebenzisi be-imeyili ukuphatha kalula nokulandela wonke amabhokisi abo eposi. UMarcel Becker, Umqondisi Omkhulu Womkhiqizo kwa-AOL
Sesibonile ukuthi ukhetho oluningi ludlula lapho ukukhangisa kwedijithali bekuyikho okubaluleke kakhulu. Esigabeni sakhe sokuqala, iqembu likaMengameli u-Obama laqhuba umdlalo owakha imininingwana egciniwe yezenzo zabaxhasi kanye nezombusazwe emlandweni. Ithimba lomkhankaso likaBernie Sanders ngokusobala lilandele isibonelo sakhe. Ngenkathi uSanders engeke awine eyokuqala, i-database yabanikeli bakhe ikhiqize isizumbulu semali, konke kukhuphuke kancane. Futhi ukwenze lokhu ngenkathi uHillary Clinton ekwazi ukungena ku-database yeDemocratic isikhashana ngaphambi kokuthi iqembu liyeke ukulawula kubo bobabili abazongenela ukhetho.
Amaphuzu avelele wokusebenzisa i-imeyili kaMongameli
UHillary Clinton uhola iphakethe okubhaliselwe kwe-imeyili. Ama-46% abaphendulile abhalisela umkhankaso we-imeyili kaHillary Clinton vs 39% kaBernie Sanders no-22% kaDonald Trump.
I-imeyili isetshenziselwa kakhulu i- khulisa imali. Ngaphezu kwesigamu sama-imeyili wokukhankasela ukhetho (ama-57%) agxile kakhulu kumnikelo. U-59% wabaphendulile ababike ukuthi banikele emkhankasweni kaHillary Clinton bancengwa ukuthi benze njalo nge-imeyili, uma kuqhathaniswa nabangu-19% abasekeli bakaDonald Trump.
I-imeyili neSocial Media yizona ezamukela kakhulu iziteshi zokumaketha, Abaphenduli babika i-imeyili (18%) kanye nemithombo yezokuxhumana (19%) njengendlela abayithandayo yokuthola imininingwane yomkhankaso.
Kukhetho oluhehayo ngokombono wokumaketha. Ngenkathi amazinga okuvunyelwa edumazekile futhi abazobhapathizwa babonakala bebalekela izikhundla ze-centrist, amazinga okuphendula ngokusebenzisa izindlela zendabuko nezedijithali awekho eshadini. Kuzothakazelisa ukubona umthelela womdlalo ngamunye wezokumaketha oza ngoNovemba. I-Alto Mail ihlanganiswe le infographic kudatha.
Tags: bernie sandersDonald icilongoIminikeloUkhethoi-clinton yama-hillaryimaliisenzo sezepolitikiiminikelo yezepolitikiUmongameliukhetho lukamongameli